‘पुड्के’कै हात माथि, चाहे भने असम्भव भन्ने केही छैन ! « News24 : Premium News Channel
‘पुड्के’कै हात माथि, चाहे भने असम्भव भन्ने केही छैन !
काठमाडौं । कुनै समय कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई ‘पुड्के’ ‘थेप्चे’ भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका थिए । तर शिखर वार्तामा ट्रपको हात तल र त्याही ‘पुड्के’ भनेका किमका हात परेको छ ।
यसलार्इ विश्वभरीका मानिसले अनुभव गरेका छन् । मङ्गलबार बिहान सिङ्गापुरमा भएको शिखर वार्तामा किमको हात माथि र ट्रपको हात तल परेको अनुभव गरेका हुन् ।
दुवै जनाबीच अनुवादक मात्र राखेर सिङ्गापुरको एक होटलमा एक्लाएक्लै गरिएको थियो । वार्तापछि उनीहरूले एक संयुक्त सहमतिपत्रमा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सहमतिलार्इ एेतिहासिक मानिएको छ।
वार्तापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए – ‘मलाई सोध्नुहुन्छ भने वार्तामा एकदम राम्रो प्रगति भएको छ, यस वार्ताले हामीलाई एकदम सफलता दिनेछ ।’
राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्ताबाट हासिल भएको उपलब्धीबाट आफूले निकै गर्वको अनुभव गरेको बताएका छन्। उनले विगतको दाँजोमा अब संयुक्त राज्य अमेरिका र कोरियाली प्रायद्विपबीचको सम्बन्ध नितान्त भिन्न हुने पनि बताएका छन्।
यसै वार्ताबाट प्रभावित भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेतालाई फेरि भेट्ने बचन दिनु भएको छ । सिङ्गापुरमा भएको ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले नेता किमलाई ह्वाइट हाउसमा भेट्ने बचन दिएका छन् ।
ट्रम्पले सम्झौता हस्ताक्षर समारोह समापनपछि ‘हामी फेरि भेट्छौँ, सम्भवत हामी ह्वाइट हाउसमै भेट्छौँ भनेका छन् । दुई नेताबीच भएको पहिलो भेटघाटबाट अत्यन्त प्रसन्न हुनु भएका ट्रम्प उत्तर कोरियाली नेतासँग बारम्बार भेटगर्ने पनि बताउए ।
एेतिहासिक संयुक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
सिंगापुरको अभूतपूर्व वार्तापछि उनीहरूले एक संयुक्त सहमतिपत्रमा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सहमतिलार्इ एेतिहासिक मानिएको छ।
नेता किमले बैठक ऐतिहासिक भएको भन्दै विश्वले अब ठूलो परिवर्तन देख्न पाउने बताएका छन्। दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको सहमति पत्र पत्रकारहरुलाई वितरण समेत गरियाे।
किमको हात माथि
किम र ट्रम्प हात मिलाइरहेको धेरै फोटो सार्वजानिक भयो । प्रय धेरै जसो फोटेमा फोटोमा किमको हात केही माथि उठेको छ । ‘के किमले आफू अमेरिकासँग नझुकेका संकेत दिएका हुन् या यो किमको हात मिलाउने सामान्य तरिका मात्र हो ?
किम र ट्रम्पलाई लिएर विश्वभर नै दिनमा प्रय एउटा समाचार बन्ने गरेको थियो । त्यासैले किम र ट्रपको वर्तालाई सञ्चारमाध्महरुले सानो सानो कुरालाई पनि नियालेर हेरको छ ।
दुवै नेताहरू एकले अर्काको अनुहारमा हेर्दा मात्र मुस्कुराउने गरेको र अन्य समयमा गम्भीर देखिने गरका भिडियो र फोटाहरू सामाजिक संजाल र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भाइरल भइरहेका छन् ।
तेस्रो विश्वयुद्धको चर्चा
ट्रप र किमले गर्दा तेस्रो विश्वयुद्धको शुरुवात हुने कतिले त आकलन समेत गरेका थिए । ट्रप र किमलाई जोडेर तेस्रो विश्वयुद्धको चर्चा पनि नभएको भने होइन । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति बन्ने भविष्यवाणी गरेका एक व्यक्तिले गत मे महिनामा तेस्रो विश्व युद्ध हुने भविष्यवाणी गरेका थिए।
त्यो समाचार यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा चर्चाको विषय भएको थियो । क्लेयरवायन्ट होरोसिओ विमग्यास नामका व्यक्तिले आगामी मे महिनाको १३ तारिकका दिन तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने दाबी गरेका थिए।
चाहे भने असम्भव भन्ने केही छैन
ट्रप र किमलाई कति पयले त विश्वकै साढेको रूपमा पनि लिएको थियो । ट्रप र किम सधैँ एक अर्कालाई सिध्याउने ढम्की दिँदै आएका थिए । एकबेला त किम र ट्रप भेट भइहाल्यो भने पनि सिधै साढे जुधे जस्तै एक अर्काबीच हानाहान हुन्छ जस्तै भएको थियो ।
कसले सोचेको थियो र किम र ट्रपबीच यस्तो ऐतिहासीका भेटवर्ता हुन्छ भनेर ? यदि भेट भइहाल्यो भने पनि एकअर्कामा हानाहान हुन्छ जस्तो गरेर भुक्ने गरेका थिए । तर किम र ट्रपबीच ऐतिहासीका भेटवर्ता भयो ।
नेपाली एउटा उखान छ ‘त चित्त म पुर्‍याई दिन्छु ।’ चाहे भने असम्भव भन्ने केही छैन । किम र ट्रपले भेटवर्ता गर्ने इच्छा राख्यो तेहि भएर ऐतिहासिक भेटवर्ता भयो । यी दुई नेताले तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात गर्न चाहेको भए पनि असम्भव भन्ने चाहिँ थिएन ।
कमरेडहरू, भ्रष्टाचार रोक्ने कि भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ने गीत प्रतिबन्ध लाउने ?
पुलवा आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानसँग लिने सम्भावित बदला के होला ?
कश्मिर हमलामा आफ्नाे संलग्नता नरहेकाे पाकिस्तानकाे दाबी, आतंककारीलाई शरण दिइएको प्रमाण देखाउन चुनाैती
अफगानस्तानमा झडप, गएको २४ घण्टामा ५३ जनाको मृत्यु
जिम्बाबेको दुई सुनखानीमा दुर्घटना, ६० जनाभन्दा बढीको मृत्यु